Isicwangciso-qhinga se-B2B yezeNtlalontle kufuneka sahluke njani kwiQhinga leB2C | Martech Zone
Isicwangciso-qhinga se-B2B yezeNtlalontle kufuneka sahluke njani kwiQhinga le-B2C
NgeCawa, ngoMatshi 27, 2016 NgeCawa, ngoMatshi 27, 2016 Douglas Karr
Njengoko uqhubeka nokufunda malunga nezicwangciso zeendaba zosasazo kwi-intanethi, uninzi lolwazi lwezicwangciso zentlalo lujolise kwishishini ukuya kubathengi (i-B2C). Kodwa kukho umahluko omkhulu phakathi kwe-B2C kunye ne-Business-to-Business (B2B). Makhe sixoxe ngezinye zazo:
Umenzi wesigqibo Ngelixa isigqibo sokuthenga se-B2C sinokuba nemijikelezo emifutshane kwaye sixhomekeke kumthengi okanye isibini esithenga, izigqibo zeshishini zihlala zinamanqanaba amaninzi okuvunywa kunye nemijikelezo yokuthenga ixesha elide.
iziphumo -Xa umboleki esenza isigqibo esibi sokuthenga, izohlwayo zohluke kakhulu kwishishini. Umntu oshishino unokuphulukana nokuthenjwa kubaphathi babo, aphulukane nomsebenzi, kwaye aphulukane nengeniso okanye inzuzo ukuba imveliso okanye inkonzo ayenzi ngokokulindelweyo.
umqulu -Kaloku imida yenzuzo inokufana, ivolumu eyimfuneko yokuhlangabezana neenjongo zentengiso yahluke kakhulu. Abathengi be-B2B bahlala besebenza kwiqela elincinci, elijolise kakhulu kumathemba.
italente Imijikelezo yokuthenga emifutshane kunye neevolumu eziphezulu zifuna intengiso enkulu kunye nemizamo yentengiso. I-B2B ifuna intengiso enkulu kunye nentengiso, kodwa nangakumbi kufuna iqela elothusayo lokuthengisa ukubonisana nomthengisi nokubanceda. Ayisiyiyo intengiso kuphela, kodwa ibanceda kwimizamo yabo yeshishini. Abantu abathengisayo abangabacebisi abathembekileyo kunye neeasethi kwishishini labo zezona ziphumelele kakhulu.
le Inqaku elivela kwiHlumelo leNtlalo iinkcukacha uninzi lwamaqhinga ayimfuneko ukubandakanya impumelelo Isicwangciso-qhinga semidiya yoluntu ye-B2B.
Ngesizathu esithile, uninzi lweenkampani ze-B2B ziye zasokola ukuqonda intengiso yemidiya yoluntu okanye ukuyihoya. Ngaphandle kwempumelelo eye yabonwa ziinkampani ze-B2C kwimidiya yoluntu, iinkampani ze-B2B zisaxhomekeke kubuchule bendabuko njengokufowuna okubandayo nokuzimasa isidlo sakusasa senethiwekhi. Ezo maqhinga zisasebenza, kodwa akufuneki zisetyenziswe endaweni yemidiya yoluntu. Endaweni yoko, kuya kufuneka udibanise imithombo yeendaba zasekuhlaleni kwisicwangciso-qhinga sakho seziphumo ezingcono. UDomininique Jackson, uHlumelo lweNtlalontle
Sifanele sihluke njani isicwangciso sakho se-B2B yezeNtlalontle?
Goals -Iinjongo zesicwangciso-qhinga semidiya yoluntu se-B2B sigxile kwilizwi, ukugcwala, ukukhokelela kunye nokuguqula. Isicwangciso sabathengi siza kuhlala sigxila kuphawu, ukukhula kwabaphulaphuli kunye neemvakalelo. Ngamanye amagama… ukujolisa kuthelekiswa nomthamo.
Strategy -Umxholo, unyuselo, kunye kubahlalutyi zijolise kwisicwangciso-qhinga semidiya yoluntu ye-B2B. Isicwangciso sabathengi sinokugxila kukunyaniseka kwegama, inkonzo yabathengi kunye nokwakha uluntu.
umxholo -Umxholo we-B2B uphuculwe ukufundisa kunye nefuthe kubaphulaphuli benkampani ukwakha ukuthembana ngamathemba. Isicwangciso sabathengi sisetyenziselwa ukwakha isazisi sophawu kunye nokukhulisa indawo abahlala kuyo kwi-Intanethi.
tags: b2bb2b amacebo amajelo asekuhlalenib2b kuthelekiswa b2c kwimidiya yoluntub2cb2c amacebo amajelo asekuhlaleniowenza izigqiboUDominique Jacksonitalente yokuthengisaiziphumo zemidiya yoluntuIziphumo zesicwangciso-qhinga semidiya yoluntuivolumu yemidiya yoluntuukuthengisa kwezentlaloiqhinga lokuthengisa eluntwiniukuhluma kwezentlalo